नेपाल – युएई : कसरि हेर्ने लाईभ ? – WicketNepal
नेपाल – युएई : कसरि हेर्ने लाईभ ?
Birat Jung Rayamajhi, २०७५ माघ ११, शुक्रबार १०:२६
विकेटनेपाल, माघ-११ , शुक्रबार
नेपाल र युएईले आज नेपाली समय ११:१५ बजे युएईसंग भ्रमण अन्तर्गत पहिलो एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल्दै छ। सिरिज अन्तर्गत नेपाल र युएईले ३ वटा एकदिवसीय र ३ वटै टि-२० अन्तर्राष्ट्रिय खेल्ने तालिका रहेको छ।
सिरिजको प्रत्येक खेल युएई क्रिकेटले प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने बताएको छ। बोर्डले बिहिबार सामाजिक संजालमा पोस्ट गर्दै लाईभ हेर्ने लिंक दिएको छ।
#UAEvNEP LIVE STREAMING LINK ? https://t.co/P2BNY6KW5w
STREAMING AT MATCH START 25/1 9.30a…be patient peeps!!!
IMPORTANT – @ICCAcademy can accommodate 1,000 FANS, so FIRST COME FIRST SERVED, otherwise you can watch ONLINE or at @DxbSportsCity #Kickers @ANIBDXB @tykasports pic.twitter.com/9e2alws4Wv
— UAE Cricket Official (@EmiratesCricket) January 24, 2019
PitchVision.com नामक वेबसाइटमा खेलको प्रत्यक्ष प्रशारण हेर्न सकिने बोर्डले बताएको छ। युएई बोर्डले दिएको लिंक ( क्लिक गर्नुस ) मा गएर खेल हेर्न सकिने बोर्डले बताएको छ।
खेलको स्कोर अपडेट भने विकेटनेपालको फेसबुक पेज , ट्वीटर र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नु हुनेछ।
खेल हेर्न आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट एकेडेमी मैदानमा दर्शकहरुलाई प्रवेश निशुल्क गरिएको छ। तर १ हजार भन्दा बढी दर्शकले मैदानमा खेल हेर्न पाउनेछैनन्। युएई बोर्डले १ हजार जनालाई मात्रै मैदानमा प्रवेश दिने र अन्यलाई अनलाइनमा प्रत्यक्ष हेर्न अनुरोध गरेको छ।
सिरिज अन्तर्गत नेपालले दोश्रो एकदिवसीय जनवरी २६ र तेश्रो २८ तारिकमा खेल्नेछ। ३ वटै एकदिवसीय खेलहरु नेपाली समय ११:१५ बजे सुरु हुनेछ। एक दिवसीय सिरिज पछि टि-२० सिरिजको पहिलो खेल जनवरी ३१, दोश्रो फेब्रुअरी १ तथा तेश्रो फेब्रुअरी ३ तारिकमा खेलिनेछ। सबै टि-२० खेलहरु नेपाली समय २:४५ बजे दिउसो सुरु हुनेछ। सबै खेलहरु दुबई स्थित आईसीसी एकेडेमी मैदानमा खेलिनेछ।